PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Owe-ANC oshone engozini yemoto uchazwe njengobekhuthele
Owe-ANC oshone engozini yemoto uchazwe njengobekhuthele
UCHAZWE njengomuntu obengumbumbi, ekhuthele ezithobile kodwa engahambisani nezinto eziphambene kwi-ANC uMnuz Sthembiso Sibiya (47) oshone engozini yemoto ngoLwesithathu ebusuku ngaseMpangeni.
USibiya, obengumgqugquzeli we-ANC esifundeni iMusa Dladla, ushonele endaweni yesehlakalo phakathi kwaseMthunzini Toll Plaza nasezimpambanweni zaseSikhaleni kuN2 ngemuva kokuba imoto yakhe ishayisane mahlaze neloli.
Umxhumanisi wethimba lesikhashana le-ANC uMnuz Sihle Zikalala, uthe uSibiya uyisebenzele inhlangano. Uthe ubengumuntu obehlale efuna kube nobumbano kodwa ema eqinisweni. “Besithembele kuyena ezintweni ezithinta ukuqinisekisa ukuthi imogomo yenhlangano iyalandelwa. Ubekwazi ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zenhlangano ziyenzeka.”
UMnuz Thamsanqa Sibiya, okhulumela umndeni uthe uSibiya wajoyina uMkhonto weSizwe eneminyaka engu-18 lapho aqeqeshwa khona eTanzania. Uthe wachitha isikhathi eside esekudingisweni wathi uma esebuyile waba sekhaleni emkhankasweni wokuqinisekisa ukuthi abantu bayakhululeka. “Intsha ilahlekelwe kakhulu ngoba ibibukela kuyena ezintweni ezithinta ukuziphatha. Wazikhandla esebenzela uphiko lwentsha lwe-ANC, ngemuva kokuqokwa ukuba ngumgcinimafa wokuqala walolu phiko esifundeni iNorthern Natal, esiyaziwa ngeMusa Dlaldla.”
Uthe ubejutshwe eMalahleni njengoba bekunengqungquthela iqhaza lakhe kuwukwakha inhlangano. UbenguSihlalo wegatsha le-ANC Obanjeni, eMlalazi.
“Sithobekile ngemiyalezo esiyitholayo kubuholi be-ANC nakumalungu. Ushiye emhlabeni izingane ezintathu, abafana ababili nentombazane eyodwa nonkosikazi wakhe uNkk Sindile Madube Sibiya. Sizomemezela ngamalungiselelo omngcwabo.”
UZikalala uthe uSibiya ubambe elikhulu iqhaza engqungqutheleni ebingempelasonto eMusa Dladla.
“Wayebhekele ezokuphepha esifundeni iNorthern Natal ngemuva kokuvulwa umlomo kwe-ANC. Ubelwela ekutheni impilo yabantu ithuthuke ikakhulu esifundeni sakhe.”